Illowsho Dhawaa Ma Ummul Baa? – Maandoon
January 19, 2017 maxammad qoordheere 0 Comment
“Illowsho dhawaa ma ummul baa?”, waa maahmaah Soomaaliyeed oo soo jireen ah, qofkii ay maankiisa ka soo maaxatayna wuxuu ahaa qof aad u xikmad badan, si fiicanna ugu fiirsaday. Maahmaahdana waxaa la xusuustaa mar kasta oo la arko qof dhakhso ku illoobay arrin ay ahayd in uusan illoobin.
Sababta aan u soo qaatay, waa dadkeena oo wixii ku dhacaba iska ilaawa, hadday ku soo laabatana arinka dhan kale iskaga jeediya, ma garan ma samir badnibaa? Ma doqoniimaa? Mise waa damqasho la’aan?.
Dalkeenii waxaa soo gaaray burbur uu oday inkaaran inoo horseeday, haddana si indho la’aan ah baa loogu sacab tumay kuwii dhibta ina baday. Qabiil iyo qurunkiisu, qurux buu inoo noqday, colaaddii iyo qaxii uu inoo horseedayna waqti gaaban baan iskaga illawnay, oo ruuxaad aragtidba “EEBBOW NABAD” baa u sahay ah, balse, la isma waydiin ibtiladaan halka ay ka soo bilaabatay. Oo haddii la yiraahdana, yaa oday maxkamadeen kara, wuxuu noqonayaa Hanad iyo Halyeey Qaran.
Tagtada wixii ay ina baday waxba kuma aanan qaadan, ee wali sidii baan u soo taagannahay.
Waxaa jirta, sheeko xariiro tiraah: “Nin boqor ah baa magaalo ka talin jiray, wuxuu ahaa nin aad u xaasidnimo badan, oo naxariistii ka guurtay, dadkuna waxay ku qabeen dhib badan, kamana hadli jirin iyaga oo naftooda u cabsanaya, dhibna uma yareen. Kadib boqorkii wuu xanuunsaday, wuxuuna dareemay in tiisii soo gashay, uuna sii noolaan doonin, Kadib Boqortooyadii wuxuu ku wareejiyay wiil uu dhalay. Boqorkii intuusan dhiman buu dhahay: Wiilkaygiyow tali, dadkii deegaankuna farxad iyo rayn rayn bay ku soo dhaweeyeen hogaankooda cusub, balse wiilkii wuxuu aabihii fali jiray buu ogaaye, dadkii buu inta meel fagaare ah iskugu keenay, laabtana dhulka u wada dhigay, isagoon kala reebin, carruur iyo cirroolaba, ayuu la dul maray kabo adag oo hoos masaamiir ku leh. Kadibna dadkii waxay yiraahdeen: War odaygaa inoo roonaa!!!”.
Shalay Somaliya oday qabiiliiste ah baa dhibka u horseeday, muddana haystay, kadib waxaa u dhashay qabqablayaal dagaal iyo urur diimeedyo, Soomaaliduna waa iskaga sacab tumeen, markii dhib tii ka daran ay kala kulmeen, wiilashoodiina ku waayeen, gabdhahoodiina iyagoon qaangaarin, qaarkood dhagax lagu dilay, dhalintiina qayb ka mida la naafeeyay, oo adimada laga jaray iyo carabka ayay bulshadii hurdo wayn ahayd so baraarugtay, meelna la soo fariisteen kuwii horaa inoo dhaamay, iyagoo qiil hooseeya u yeelay.
Bilawgii soo ifbaxa ururka argagixisada ee magacoodu ahaa “Maxkamadaha Islaamka”, mixnadii dalka iyo musiibadii ugu waynayd, oo ilaa haatan aan laga kaban, una ekeen mid aan dhawaanahaan laga kabsan doonin.
Shalay wixii oday xume uu dalka iyo dadkaba baday, maanta tuu WADAAD baasku baday baa ka daran.
“Wadaadka shalay wan baa loo gowrici jiray, ee wiil inagama uu dili jirin”. Dariiqooyinkii Suufiyada waxaa lugu burburiyay, qabriyada ayay caabudaan, qayrkood ayay u gacan hoorsadaan, iyagoo Eebbe la shariik yeelaya. Hadalkaa dadku uma aysan fiirsan, horaybaase laga bilaabay in wax laga sheego.
Arday macallimiintooda ku caasiday, wanaag laga sugaa ma aqaan siduu u egyahay, balse caasinimadaa culimadii wanaagsanayd laga qaaday, waxaa laga dhexlay qarax, gawrac, dhagax isku dilid iyo waliba carruur kufsi.
Sheeko aan shaahid ku maqlayna waxay ahayd: “In gabar qaan gaar ah, iyadoon la bikro jabin aysan kitaabka taaban karin, waysaba uma dhawranto”. Markii iigu horaysay wiil arday dugsi qur’aan aan isla ahayn baa falkaa ku kacay, isagoo noqday Macallin dugsi, reerkii falkaa loo gaystay way ka gilgisheen, balse ma aysan waxyeeleen, waayo waa macallin quraan dhiga, waxbana lama oran karo, si caro Eebbe looga fogaadaana waa in la cafiyaa, falalka nuucaa oo kale iyo kaba sii xun dalkeenii way ka jiraan, af iyo indhaba waa laga dataa, oo haddaad ka hadashid waxaad noqonaysaa, qof jannada Eebbe ka qada!.
Sannado ka hor, wiilashii laga soo masaafuriyay dhulalkii kale ee dalka la geeyay si ay naftooda u qarxiyaan, waalidkii dhalay markii ay arinkaa ku baraarugeen, nafta waxay ku sasabeen Eebbe wayne baa oofsaday, geeriduna waa xaq. Cid taasi ka indho qabsan kartaa ma jirto, balse SABAB?!, Cadceeduba ma soo baxdo sabab la’aan, caruurtaa yaa diray?
Laysma waydiiyo, haddii lays waydiiyana, lama sii faaqido, illeen goobtii uu ku badnaa bay ku biya shubanee, halkaa baa dib candhuufta la iskaga liqaa.
Waqti aan sii dheerayn, dhawr dhalinyaro ah baa maxkamid Maraykanka ku taal xukuno kala duwan ku riday, waalidiintii ubadkaa dhalay, uurka waxay ku haystaan afkana ka sheegteen in caruurtoodii xaqdaro lagu maagay, cadeemaha la soo hor dhigay kuma qancaan, kumana doodaan falkaas ciddii kor ka maamulaysay in goobta la keeno, si loo wada maxkamadeeyo giddigood. Wiilka yaa ku dhaliyay in uu nabad diid noqdo?, Ma waxyi samada kaga soo dagaybaa? Jawaabta waa maya, cidda ku dhalisay ee maanka ka xaday waa WADAAD, isaga in dambiga lagu soo oogo ma aqaan sababta diiddan?
Waxaaba layaab leh, 30 jir maanka laga xaday, malahayga way sixreen ama waa daroogeeyeen, illeen qof dhan oo Eebbe caqli siiyay kaalay naftaada halig, ilama aha dhayal inuu ku yeelayo. Jannada dadka loogu baaqayo caruurtana lagu beer laxawsanayo, Tollow raggaa maxaa u diiday?!. Ma aqaan, mana garan karo xilliga dadku runta ay ka hadli lahaayeen soona bandhigi lahaayeen, maan ku dhiiglaha ubadkii dhameeyay, umaddiina kala fogeeyay, konton kooxna inoo kala qaybiyay.
Nabigaa (NNKH) horay inoogu sheegay waa waxay dadka ku beer laxawsadaan, umatu Muxammad sowtay dhahaan waa mid?.
Hooyada wiilkeeda la wafaasho, waa dhibbane dhankasto ah, kow murugo wiilkeedii ay kusoo tiir iyo tacab beeshay, ayay sahal ku wayday, laba dariska ku hareeraysan oo shalay wiilkeeda wanaag ku sheegi jiray baa maanta tusaale xun ka dhigta, ubadkoodana kaga diga sida hooyadaa oo kale wiilkoodu in uusan noqon oo naftiisa haligin, tan ugu daranna waa ciidamada sirdoonka oo si gooniya isha ula raaca, sidii inay raali ka ahayd falkii wiilkeedu ku kacay. Waa miskiin aan mag lahayn, Way ogtahay, waana la wada ogsoon yahay, cidda waxaa u sababtay kama hadli karto, haddiiba niyadeeda ku soo dhacaan waxaa lagu beer laxawsanaa: “Culimadu waa ambiyadii oo kale ee cadaab ha mutaysan”. Ula jeedku waa xaqa indhaha iyo afkaba ka qabso, oo haba hadlin.
Dhibaato waa ay dhacdaa, waxayse leedahay meel ay ku dhamaato, balse halka ay ka bilaabatay waa in la is waydiiyaa, si xal loogu helo.
Ma jirto cid halkii ay ku dhalatay iskaga hayaami karta, iyadoo ku haysata nolasha wixii u kaamilka ahaa. Shalay dhulkeenii dagaal baan kaga qaxnay, innagoo wada raadsanay nabad iyo nolal. Dunidii aan u tagnay waxay inoo arkeen inaan nahay, abaal laaweyaal, dad nabadda neceb, iyo dad istakoora, keenii la qabsadana, diintii uu aaminsanaa inuu caayo iyo inuu innaga dhan mid innagu masaalo. Soo ifbixii jabhadaha diimaha, 2006 ilaa wixii ka dambeeyay, caruur qurbaha ku dhalatay, baa dalkii so aadaayay, iyagoo badiyaa is qarxiya. Waalidkoodii waxay dhahaan caruurteena masjidka ayay inoo jireen, wayna wanaagsanaayeen, haddana maankaa laga xaday, Hal ma aha, laba ma aha, waa tiro ka toban ah, iyo ka badan.
Masaajidda waxaa maamula wadaaddo. Wadaaddadu waa aadane qaldami kara, maahan malaa’ig. Shalay markii carruurta la soo masaafurinaayay, ogaansho la’aan u sababee, balse maanta iyo berri kuwa la soo dirayo, waa laba mid, inaan ku raali nahay, iyo inaan hurudno oo aanan marnaba baraarugsaneen.
Maxaa loo waayey waalid ama bulsho, inta is xilqaama ragga guriga Eebbe dhexdaggan ee carruurta soo masaafuriya dagabal ku sameeya? Maxay baan raggaan aanan shaqaysan ee haddana gawaarida qaaligaa ku socda, markii wiil iyo wiilalba la waayo aan loola xisaabtamin?,
Haddii la rabo in laga gudbo magac xumada iyo in wiil somaliyeed dad mindiyeeyo, dhul uusan lahayn falkaa ku sameeyo, midna dalkii iyo dhulal kale isku qarxiyo, waa in raggaas lala xisaabtamaa, la maxkamadeeyaa, baarisna lagu sameeyaa. Haddii kale, Trump iyo Turnbull hadalkooda waa sax kuwa dalka joogana waa Al Shabaab, kuweena dibada joogana ISIS. Iyo ISIS kalkaal.
Gunaanadkii, waxaan ku talin lahaa, si aan dunida nabad ugu noolaanno, dadyowga aan la noolnahayna aysan inoogu qaadan bahalo ay soo dhawaysteen, aan ka hortagno dhibka iyo dhib wadayaasha. Ma jirto meel ay diintu ku xarimayso in wadaadka lala xisaabtamo, qaladkiisana la saaro. Magaalooyinka aduunka ugu masaajidda badan waxaa ka mid ah Muqdisho, waana halka dalka ugu mushkiladda badan. Taa macnaheedu ma aha Masjidka ayaa mushkilad ah. Masjidku, waa guri Eebbe falna ma gaysto, ee dhibku waa masaska masjidka dhex fadhiya. Sidaas oo ay tahay, wadaaddadeenu waxay TV-yada har iyo jeer kaga qaylo dhaamiyaan masjid baa qabyo ah ee aan dhisanno, welise la ma arag inaga oo leh aan dhisno waddo laamiya, aan qodno ceel, aan dhisno isbitaal, aan dhisno maktabad si aqriska uu inoogu bato. Dhulal kale masaajid laga dhiso macno kale baa ku duugan. Aan madaxa sare u qaadno si aan xaqiiqada uguu wada baraarugno, ama haddii kale wixii dhacaba qadar Rabi, aan isku qancino, ubadkeennana aan sidaa kuwayno, oo maalinba mid ha is qarxiyo, mid kalena dadka ha rasaaseeyo, midna mindi ha soo qaato, kadibna aan niraahno wiil wanagsan baa inaga baxay!!!
W/Qoray: Muxammad Xusseen Xassan Qoordheere.
← Tafsiirka diinta ma la dhammaystiray?
February 21, 2017 Ibraahim yuusuf 0